नेपाली र अमेरिकी सेनाद्वारा ५ दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सुरु
गोरखा, ३१ साउन । नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको संयुक्त आयोजनामा गोरखा नगरपालिका–८ आहालेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय परिसरमा आजदेखि पाँचदिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर शुरु भएको
बाढी पीडित क्षेत्रमा सुरु भयो, महामारीको संकेत
राजविराज सप्तरी, ३० साउन । सप्तरी जिल्लामा विगत छ दिनदेखि परेको मुसलधारे वर्षाका कारण विभिन्न नदी तथा खोलामा आएको बाढीबाट प्रभावित ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका बासिन्दामा विभिन्न किसिमको रोग फैलिएको
रेजिडेन्टस एसोसिएसन अफ न्याम्सका चिकित्सहरुले निकाले डा.केसीको समर्थनमा र्याली-फोटोफिचर
काठमाडौं, २९ साउन । रेजिडेन्टस एसोसिएसन अफ न्याम्सका चिकित्सहरुले विगत २१ देखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग प्रति ऐक्यबद्धता जनाउदै र्याली प्रदर्शन गरेका छन् । आज चुप रहे.. भोलि आफैलाई
पाँचथर, २८ साउन । आगामी पाँच वर्षभित्र पाँचथरको याङबरक गाउँपालिकालाई पूर्ण पोषित गाउँपालिका अर्थात कुपोषणमुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिने भएको छ । यस गाउँपालिकालाई पूर्ण पोषित गाउँपालिका बनाउन निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शुक्रबार
डा.केसीका समर्थकले सडकबाट दिए ६०१ जना यस्तो चेतावनी, माग पुरा गछौँ कि छोड्छौँ ? (फोटोफिचर)
काठमाडौं २८ साउन । विगत २० दिन देखि आमरण अनसनरत डा.गोविन्द केसीको समर्थनमा विशाल जनप्रदर्शन भएको छ । राजधानीको माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको प्रदर्शन बानेश्वरमा पुगेर कोणसभामा परीणात भएको
बिर्तामोड झापा, २६ साउन । झापाको बिर्तामोडस्थित बीएण्डसी अस्पतालले भोलिदेखि स्वाइन फ्लुको उपचार गर्ने भएको छ । स्वाइन फ्लुको उपचारका लागि अस्पतालले बहिरङ सेवादेखि नै शंकास्पद बिरामीलाई बिशेषरुपमा अन्य बिरामीभन्दा
काठमाण्डौैं, २५ साउन । चिकित्सा तथा स्वास्थ्यशिक्षा सुधारका निम्ति हाल व्यवस्थापिका संसदमा छलफलमा रहेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक २०७३’ले सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको भन्दै परिमार्जन सहित पास गराउन स्वास्थ्य क्षेत्रका
काठमाडौँ, २५ साउन । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मौसमी रुघाखोकी (स्वाइनपफ्लु) का कारण हालसम्म ३८१ बिरामी देखापरेका र तीमध्ये १० जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले
बैतडी, २५ साउन । बैतडीको ग्रामीण क्षेत्रका महिला महिनावारी भएका बेला सरसफाइमा ध्यान दिन थालेका छन् । पहिले चार दिनसम्म ननुहाउने महिला अहिले महिनाबारी भएको सेनेटरी प्याडसमेत प्रयोग गर्न थालेका
खोटाङ, २४ साउन । दुवै मिर्गौला काम नलाग्ने भएपछि जेठा छोरा सुमनको १९ वर्षमै मृत्यु भयो । सुमनको काजकिरिया नसकिँदै माइला छोरा सोही रोगबाट जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेका छन् । हुर्किसकेको
काठमाडौं, २३ साउन । स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल र नेपालका लागी अमेरिकाका कार्यावाहक राजुदत मिचेल गोन्जालेस बिच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । भेटका क्रममा मन्त्री पोखरेलले भुकम्पको बेला अमेरिकाले नेपाललाई गरेको
पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईको स्वास्थ्यमा सुधार
भक्तपुर, २३ साउन । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईको स्वास्थ्य अवस्था सुधार भएको छ । भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित नागरिक कम्युनिटी अस्पतालमा गत २१ गते प्रोस्टेट अर्थात मूत्रथैलीको
झापा,३१ भदौ । झापामा तालु नभएको बच्चाको जन्म भएको छ । दमक नगरपालिका २ स्थित
दुःख सम्झेर कमाउन मन लाग्छ सुख सम्झेर रमाउन मन लाग्छ मृत्यु सम्झेर डराउन मन लाग्छ
काठमाडौँ, ३१ भदौ । पाँच महीनाको अवधिमा विपद्का घटनामा परी २७१ जनाको मृत्यु भएको छ